Iyo yekuvandudza kwePokémon GO inosvika nedzimwe diki diki | IPhone nhau
Iyo yekuvandudza yePokémon GO inosvika nedzimwe diki diki
Iyo Pokémon fever iri kudzika zvakanyanya uye nekukurumidza chaizvo, kune vashoma uye vashoma vanomhanyisa vashandisi vemutambo uye sekutsvagurudzwa kwazvino, 80% yevatambi vezuva nezuva vamira kutora chikamu mune Pokémon GO chiitiko. Nekudaro, izvo zvekuvandudzwa zvichiri kunonoka, Niantic akatoyambira kuti mutambo uyu waive uri Beta uye waizoenda kunogara uchigadziriswa. Izvi zvinotevera, Pokémon GO yawedzera mashandiro ayo anotibvumidza isu kuziva iyo nzvimbo kwatinovhima Pokémon mune yayo faira, pamwe nekugadzirisa mamwe eakawanda mabugs ayo mutambo unotambura nawo.
Iyi ndiyo vhezheni 1.9.0 yekushandisa inosvika kune iyo iOS App Store. Kunyange zvakadaro, Tichakamirira iyo yakavimbiswa yekuvandudza panguva yekupedzisira Keynote, hatitaure nezve zvimwe kunze kwekuuya kwePokémon GO kuApple Watch, chimwe chinhu chichatibvumidza isu vaviri kuchengetedza pabhatiri mune yedu iOS kifaa, pamwe nekupa iyo wachi yakawanda kushandisa kupfuura zvataigona kutarisira, chokwadi ndechekuti zvingave zvakanaka kutanga kutamba neApple Watch kubva zvino, asi isu ticharamba tichimirira, tawona izvo zvatakaona ndeZvokushandisa izvo zvinovimbisa asi zvinononoka kuendesa, zvinhu zviri mumuzinda zvinofamba zvishoma nezvishoma, sekutaura kwaizoita vagadziri veWhatsApp.
Sezvatakambotaura, iyo gadziriso inogadzirisa inofungidzirwa sisitimu zvikanganiso, pamwe nekuwedzera mukana wekuona mukati meiyo Pokémon faira, kwatinoivhima. Kuti tiite izvi, isu tichaenda kune iyo tebhu mukati medu Pokémon uye tinotsvedza pasi zvachose, iyo nzvimbo yekutora ichaonekwa, pasina kumwe kunonoka. Zvakare, mune ino gadziriso ivo vakavandudza iyo sisitimu yePokémon GO Plus, chishongedzo chine stock shoma pane zvaitarisirwa, sezvakaitika mazuva apfuura neiyo iPhone 7 Plus Jet Nhema. Imwe yemakanganiso akagadziriswa inoita kunge ndiyo lag kana uchitanga kamera neakawedzera chokwadi modhi, kunyangwe iri nyore kwazvo kutora kana isu tisisina kugadziriswa, saka tora mukana wacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo yekuvandudza yePokémon GO inosvika nedzimwe diki diki
Isingaonekwe Ruoko, inotevera Apple chirongwa chekudzora iyo iPhone
Heano maitiro eApple Watch Series 2 anodzinga mvura kubva kune maspika